အေးပိုင်ရေ ဘေးသာထိုင်နေပေတော့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » အေးပိုင်ရေ ဘေးသာထိုင်နေပေတော့
Posted by DEPARKO DEPARKO on Sep 6, 2012 in Contributors, Copy/Paste | 13 comments
မကြာခင်က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ I pay စနစ်ကိုမိတ်ဆက်လို့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ရပ် စတင်ပါတယ် အကြွေအမ်းစရာမလို ငွေကိုင်သွားစရာမလို ဘတ်စကားစီးရင် ကဒ်နဲ့စီးရုံဘဲ အကြွေကိုမအမ်းဘဲ အမေ့ခံတတ်တဲ့ စပါယ်ယာတွေ စားပေါက်ပိတ်ပြီလို့ အတွေးမှမဆုံးသေးဘူး တစ်နေ့က ပါရမီကားကို ဘူတာရုံလမ်းကနေတက်စီးဖြစ်တယ် အထူးကားပေမဲ့ လူကကျပ်ညပ်နေအောင်တင်ထားတယ် ၂၀၀ ကျပ်ကို ကျွန်တော်အသင့်ကိုင်ထားတာတောင် အော်အတောင်းခံလိုက်ရသေးတယ် ခန္ဒီပါရမီ အပြည့်နဲ့စီးလာတုန် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် အိုင်ပေးကဒ်ထုတ်ပေးတာမြင်တော့ လားလား စပါယ်ယာကိုယ်မှာလွယ်ထားတဲ့အိပ်က အိုင်ပေးစက်ကိုး ကိုယ်တော်ချောက ခပ်တည်တည်ဘဲ အဲဒီအမျိုးသမီးပေးတဲ့ အိုင်ပေးကဒ်ကို အင်္ကျီအိပ်ထဲထည့်လိုက်တယ် မှတ်တိုင်တွေအလီလီ ကျော်လာပေမည့် အိုင်ပေးကဒ်ကို စက်ထဲထည့်မဆွဲဘူး အမျိုသမီးကလည်း ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ သူ့ အိုင်ပေးကဒ် ဘယ်တော့ပြန်ပေးမလဲပေါ့ ကျွန်တော် အဲဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး တချိန်က ၀န်ထမ်းတွေ ကူပွန်ထုတ်ပေါ်ပြီး လိုင်းကားစီးတော့ စပါယ်ယာတွေ ဟောက်ဟမ်း ဆူပူ အရှက်ခွဲ ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြေးမြင်တယ် အခုဟာက ပြောင်းပြန် ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ် အိုင်ပေးနဲ့ စတိုင်လုပ်လို့မရ စိတ်ညစ်ခံနေရတဲ့မမကို ကြည့်နေတုန်း ခရီးသည်ထဲက အာနိုးလို ဗလတောင့်တောင့် တစ်ယောက်က ခံပြင်းလာပုံရတယ် စပါယ်ယာကို အိုင်ပေးကဒ်ပြန်ပေး လိုက်ဘို့ပြောတာ မခြေမငံပြန်ပြောလို့ ပါးရိုက်လိုက်တာ သွားကျွတ်သွားလို့ အိုင်ပေးမမ သူ့အိုင်ပေးကဒ် စပါယ်ယာရဲ့ သွေးစက်နဲ့ အဆွဲခံလိုက်ရပါပကော။
ကြားရတာ စိတ်မသက်သာ စရာပါလား ။
ဘယ်နှယ့် အိုးကမပူ စလောင်းက ပူပြီး ကိုအာနိုးက လူစွမ်းကောင်းလုပ်သလဲနော် ။ မိမိကိစ္စမဟုတ်ပဲ သွားကျွတ်အောင် ပါးရိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ ၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတာထက် ၊ လူ့ရမ်းကား လုပ်ရပ်လို့ပဲ ပြောရမလားပဲ ။ တကယ်နာစေချင်လျှင် ကာယကံမြောက်တဲ့ ပါးရိုက်တာမှ မဟုတ်ပါဘူး စကားနဲ့တောင် ဆွေ့ဆွေ့ခုန်အောင် ၊ နာအောင်ပြောလို့ရပါတယ် ။ လူမြင်ကွင်းမှာ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်မသတ်ဆိုင်ပဲ လက်လွတ်စပယ် ပြုမူလိုက်တာကတော့ ဘယ်သူ့အမှား ၊ ဘယ်သူအမှန်ဆိုတာထက် ၊ နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်တယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ် ။
ဟိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကပဲ တိုက်ရိုက်ရှင်းသင့်တဲ့ ပြသနာမျိုးပါ ။
အိုင်ပေး စပေါ်လာကတည်းက (ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့တွေးကြည့်တာ)သိပ်မတွင်ကျယ်လောက်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်က ကဒ်တစ်ကဒ်စာကို တယောက်စာပဲ ပေးလို့ ရသလို ၊ တစ်ခါ သုံးပြီး အနည်းဆုံး ရှစ်မိနစ်ဆိုလား ဘာလား … အဲ့ဒါကြီးကလည်း အလုပ်သိပ်မဖြစ်ဘူး ။ ကားမှားစီးလို့ ချက်ချင်းပြန်ဆင်းပြီး နောက်တကားပေါ် ပြန်တက်လျှင် ချက်ချင်းသုံးလို့ မရတဲ့ အနေထားကိုး ။ ဒါ့ပြင် အထဲက ပိုက်ဆံကလည်း များများထည့်သုံးမရတာကြောင့် လတ်တလော အခြေနေထိ သိပ်မတွင်ကျယ်ဘူးသေးပဲ ။
ကူပွန်တွေ ခေတ်စားတုန်းကလည်း ၀န်ထမ်းတွေ ကူပွန်ပေးစီးရင်း စပယ်ယာမျက်နှာကြည့်ပြီးမှ ကားစီးရတဲ့အဖြစ်တွေအကြောင်း ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါတောင် ညနေ ခြောက်နာရီကျော်မှ စီးတဲ့ကားဆို ကူပွန်မယူပါဘူးတဲ့လေ ။
ထွင်တာတော့ထွင်တာပေါ့နော် ….. တစ်ထွာတစ်မိုက်လေးတွေးထွင်ပြီး ၊ တကယ် အဆင်ပြေမလား ၊ ရေရှည်အသုံးတည့်မလား ၊ ဘာလား ညာလားတွေ ထည့်မစဉ်းစားတော့ ၊ ဘာပဲ ထွင်ထွင် သိပ်မတည်တံ့ပဲ ၊ အကြွေတွေသုံးနေတဲ့စနစ်က မပြောင်းနိုင်တော့ဘူးလေ … ။
စပယ်ယာတွေကို စကားနဲ့ နစ်နာအောင် မှတ်လောက်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်
etone ကို အရမ်းလေးစားချီးကျူးမိမှာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ သူတစ်ဘက်သားကို နစ်နာအောင် မခံချင်ဖြစ်အောင်
စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင် အပြောတတ်ဆုံးသတ်တ၀ါက စပယ်ယာပါ။
အပေါက်ဆိုးတာ စွာတာ လေးစားစရာ အချက်တော့မဟုတ်ပေမယ့် .. ကျွန်မက နဂို စိတ်ခံကိုက ကိုယ့်ကို attack လုပ်လျှင် ၊ မဟုတ်မခံ စိတ်ဆတ်တတ်တာကြောင့် ၊ ခဏခဏ စပယ်ယာတွေနဲ့ကွိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ မိန်းမဆိုပြီး တဆင့်နိမ့် လူတန်းစားလို သတ်မှတ်လို့ အလျော့ပေးတဲ့ လူတွေ ရှိသလို ၊ ပြန်စွာတဲ့ လူတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ် ။
မနက်ခင်း လန်းဆန်းနေတဲ့ အချိန်လေးတွေ သူတို့နဲ့စကားများရလို့ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ (အိပ်ပုတ်ကြီးပြီး ရုံးကားသွားမစီးတဲ့နေ့မျိုးပေါ့ ) သူများကို ချိုးချိုးပဲ့ပဲ့ပြောရတာ မကောင်းပေမယ့် စိတ်အရမ်းတိုလာလျှင် ဘာကိုမှ မမြင်တော့ပဲ ၊ နှစ်ပြားမတန်အောင် ရန်ပြန်တွေ့တတ်တာကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ၊ မိန်းမကြမ်းကြီးလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ် ။ တစ်ခါကဆို ကားပေါ်မှာ challengeလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အထိရှိခဲ့ဖူးတယ် ။ အိမ်ကတော့ သူတို့ သမီးလေးကို သူများသမီးတွေလို နူးနူးညံ့ညံ့ကနွဲ့ ကလျလေးဖြစ်စေချင်ပေမယ့် နဂိုစိတ်ခံကိုက ဂျွတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ မဟုတ်မခံဖြစ်နေတော့ ၊ စိတ်ပင်ပန်းကြရရှာတယ် ။
ကိုချိုကြီးရေ .. သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဆိုတာ ရှိစမြဲပေမယ့်… စိတ်ရှည် ၊သည်းခံတတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ……. ခြေကုန်လက်ပမ်း ကျနေရသူပါ ။
ကားမှားစီးလို့ ၈မိနစ်ထပ်စောင့်ရမယ်ဆိုတာ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာပါ.. အဲဒီလိုမှားစီးရင် ကဒ်ဖြတ်လိုက်တာကို cancel လုပ်လို့ရပါသလား.. ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတဲ့သူဆိုရင် ပြန်တောင်းလို့ရပါတယ်.. နောက်တစ်ခုက ကိုယ်သွားရမယ့်ခရီးဟာ ကားတစ်ဆင့်ထဲနှင့်မရောက်လို့ နောက်တစ်စီးပြောင်းစီးမယ်ဆိုရင် စင်ကာပူကMRTကဒ် Systemအရဆိုရင် တော်တော်လေးသက်သာပါတယ်.. ကနဦးစစီးတဲ့ကားဆိုရင် တစ်မှတ်တိုင်ဘဲစီးစီး အနည်းဆုံး ပြား၇၃ကစယူပါတယ်.. နောက်စီးတဲ့အကွာအဝေးအလိုက် ပိုက်ဆံတက်သွားပါတယ်.. နောက်တစ်စီးပြောင်းစီးမယ်ဆိုရင် ၇၃ပြားကိုမယူတော့ဘဲ စီးတဲ့အကွာဝေးအတွက်ဘဲ ကျသင့်တာကြောင့် ၂ပြား ၃ပြား စသဖြင့်ကျသင့်ပါတယ်.. ပထမစီးတဲ့ကားနှင့် နောက်စီးတဲ့ကားကြားကအချိန်ကို ၄၅မိနစ်အတွင်းလို့ယူပါတယ်.. ကျော်သွားရင်တော့ အသစ်ပြန်စီးသလိုဖြစ်သွားမှာပါ.. မြန်မာပြည်ကကားတွေက ပုံသေယူတာကြောင့် အကွာအဝေးအလိုက်ပိုက်ဆံမဖြတ်နိုင်ပေမယ့် နောက်တစ်ကားပြောင်းစီးတဲ့အခါ ၅၀ဖြစ်ဖြစ် ၁၀၀ဖြစ်ဖြစ်လျော့ပေးရင် ပိုအသုံးထွင်ကျယ်လာမှာပါ။
အော် …. ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်သကိုး …….. မှတ်ထားဦးမှပဲ ………..
အိုင်ပေးစနစ်ဟာ နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်
နာဂဒေါ့.. ipay ကဒ်ပေါ်တော့ နိုင်ငံဂျားကလို ရှေ့ပေါက်ကတက်၊ စက်ကလေးပေါ်ကဒ်လေးတင် (ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ထားရင် ပိုက်ဆံအိတ်လေး တင်ရုံပဲဆိုတော့)၊ တီခနဲမြည်..အဲသလိုလေးထင်တာ…သူများတွေလို အလယ်ပေါက်က ပြန်ဆင်းရင် ကဒ်ကို ပြန်ပြပြီး စီးခဲ့သမျှဖြတ်တာလောက်အထိတော့ မတွေးမိသေးပါဘူး…
လား..လား..တစ်ခါသား မြို့ထဲကအပြန် ပါရမီပေါ်မှာကျမှ မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခါပဲ မြင်ဖူးလိုက်ပါတယ်..အော်..အဲသလိုဂိုးလို့ ဖြစ်သွားတယ်…
မိန်းကလေးတွေ ပြောရဲဆိုရဲ ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ လိုပါသေးလား…
ကျုပ် ကားသမားလူထွက်ဆိုတော့ဒီကားသမားတွေအကြောင်း
ကူပွန်ကို နှဖူးကပ်ပြီး ပြောင်ချော်ချော်လုပ်တာ တစ်ပတ်အနား
ပေးလိုက်တယ် ။ စနစ်တကျတိုင်ရင်ရတယ်
ပါးကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ဘူများမှတ်တုန်း အရပ်ကတို့ …
အော် .. အိုင်ပေး .. အေးပိုင် ..
အေးပိုင် … အိုင်ပေး …
သြော် ဒါကြောင့် ဟိုတလောက ကားပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က စပယ်ယာကို ဖိုက်တာလိုလိုနဲ့ စိန်ခေါ်နေတာ ဒို့ရွာသူ မအိတုန်ပါလား… ။ အဟီး..နောက်ထှာ
အဟီးးးးးးးးးးးးး ဂယ်တော့ ……. ဖိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး … အော်စကာပါ ……. ခွေးပစ်တဲ့ ဒုတ်သာသာ အော်စကာလေးပါချင့် ….. ခွိခွိ
ကျွန်တော်လည်း လူစွမ်းကောင်းတော့မလုပ်ရဲပါ စပါယ်ယာတွေရန်ဖြစ်ရင် သံဒုတ်ဆွဲ ကားသမားပါဝက်အူလှည့်ကိုင်တာ မကြာခဏမြင်ဘူးလို့ပါ taxi မစီးနိုင်တော့လည်း အင်း?